အချိန်ကို စနစ်တကျ အကျိူးရှိရှိအသုံးချတတ်ဖို့ - JobExpress Myanmar
ကျွန်တော်တို့က မိသားစု၊ ကျောင်း၊အလုပ်အတွက် အမြဲ တမ်း အလုပ်ရှုပ်နေကြတဲ့အတွက် ဘာပဲလုပ်လုပ် အချိန်ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့် အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ လူတွေကသူတို့အချိန်တွေကို ဘာလို့ Manage မလုပ်နိုင်ရတာလဲ?
Plan တွေတော့ သေချာချနိုင်ပေမဲ့ ဖြစ်မြောက်အောင်ဘာလို့မလုပ်နိုင်ရတာလဲ?
အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါ။ လူတွေက မိမိကိုယ်ကိုထက် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်‌‌ပေါ်မှာ ပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်လို့ပါပဲ။ အကယ်လို့သင်က အချိန်ကို Control မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ တွေးထားတယ်ဆိုပါစို့။ တစ်နေ့တာမှာ ကျွန်တော်တို့က တူညီတဲ့နာရီတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြပါတယ်။
ဘယ်သူဝာစ်ဦးတစ်ယောက်မှအချိန်ပိုတွေမပါလာကြပါဘူး။ မိနစ်တွေ၊ စက္ကန့်တွေကို မင်းကတန်ဖိုးမထားရင် မင်းကအချိန်ဖြုန်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ ။ ဒါကြောင့် အချိန်တွေကို ဘယ်လို Manage လုပ်သင့်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
(၁) To do list
လူတိုင်းမှာဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကိုယ်စီရှိသင့်ပါတယ်။ အိမ်မက်တွေကပဲ အောင်မြင်မှုကိုခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တာပါ။အာ့လိုအိမ်မက်တွေကိုအမှန်တကယ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ကလည်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ Goal ကိုတိတိကျကျ ထားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်နေလဲ? ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဘယ်အချိန်မှာပြီးအောင်လုပ်မှာလဲ? ဆိုတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို အကျိုးရှိရှိ ဖြစ်မြောက်အောင် ပြီးဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို မိမိကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေမှာ Schedule ချထားဖို့လိုပါတယ်။ schedule ချပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ဘာကိုအရင်စလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီး အချိန်ဇယားအတိုင်းတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ပါ။
အခုလိုလုပ်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းတွေဘယ်လောက်ထိ အားကောင်းလာလဲဆိုတာကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Be Extremely Flexible
ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လောက်ပဲအလုပ်များများ အဓိကက မယောင်ရာဆီမလူးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ Flexible ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ ပိုးဟပ်တစ်ကောင်လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကျက်စားဖို့လိုပါတယ်။ ” ကမ္ဘာကြီးပျက်သုဉ်းနေတဲ့အချိန်မှာတောင် ပိုးဟပ်တွေက အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နေအုံးမယ် “ ဆိုပြီး သိပ္ပံပည်ရှင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်။ ပိုးဟပ်တစ်ကောင်လိုမျိူး ကျွန်တော်တို့တွေလည်း အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်သူနဲ့တွေ့မယ် ၊ ဘာအကြောင်းဆွးနွေးမယ် ၊
ဘယ်အချိန်အထိတွေ့မယ်စသဖြင့်မိမိအချိန်အတွက် အချိန်တိုတိုနဲ့ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်မယ့်သူက သူများတွေထက် အောင်မြင်မှုပိုမိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Make Deadline
မိမိကိုယ်ကို Management လုပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ deadline တစ်ခုထားပြီး ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ဖို့ပါပဲ။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှတွန်းအားမပေးရင် ကျွန်တော်တို့က ပြီးဆုံးအောင်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က အိမ်မက်တွေကောင်းကောင်းမက်ပြီး ဖြစ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အာ့အရာတွေအတွက် deadline တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါ။ ဉပမာသင်က Project ကြီးတစ်ခုကို လုပ်ရမယ်ဆိုရင် အပိုင်းတစ်ခုချင်းဆီခွဲမယ် ပြီးရင် Deadline ထားပြီး လုပ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Tasks တွေလျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။
(၄) Take Time for Self-Care
သူများတွေကိုအားကျပြီး သူများလုပ်သလိုမျိူး အလုပ် (၂) ခု ၊ (၃) ခု တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်မယ် ၊ သင်တန်းတွေအများကြီးတက်မယ်ဆိုရင် မနိုင်ဝန်ထမ်းသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
Multi- tasking လိုက်နိုင်တာတော့ ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပေမယ့် ကိစ္စတစ်ခုချင်းဆီမှာတော့ Performance ကောင်းကောင်းထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်နိုင်သလောက်ကိုပဲ Plan ချပြီး Schedule ဆွဲပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအနားပေးပါ ၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ ၊ ကျန်းမာတဲ့အစားအသောက်တွေရွေးချယ်စားသောက်ပါ ၊ အားကစားလုပ်ပါ။ နောက်ပိုင်း ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတိုင်း ထိထိမိမိလုပ်လာနိုင်တာကို ကိုယ်တွေ့ခံစားရမှာပါ။
2020 နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် Booming ဖြစ်လာနိုင်သော လုပ်ငန်း (၁၀)မျို: - အပိုင်း (၂)